China Gabion Mesh Machine Kugadzira uye Fekitori | Jiake
Yakatwasuka mutsara waya yekudhira muchina
Muenzaniso Nha .: LNML
Gabion mesh muchina, unonziwo rinorema basa hexagonal waya mesh muchina kana gabion tswanda muchina, ndeye kuburitsa hexagonal waya pajira riya rekusimbisa ibwe bhokisi kushandiswa. Iyo hexagonal waya netting muchina uyu wakasarudzika muchina wekugadzira hexagonal meshwork.
Heavy-basa hexagonal meshes anoshandiswa kuchengetedza nzvimbo, kuvaka, kurima, peturu, indasitiri yemakemikari, kupisa mapaipi, seawall, makomo, mugwagwa, uye bhiriji, nezvimwe.
Wire dhayamita: 1.6-3.5mm
Saizi saizi: 60-150mm
Mesh Upamhi: 2300-4300mm
Kumhanya: 165-255m / h
Nhamba yezvinyorwa: 3 kana 5
Iwo akateedzana otomatiki gabion muchina unosanganisira ina huru mienzaniso zvikamu: Main netting muchina, ichitenderera muchina, waya kunetsekana mudziyo, uye zononoka coiling muchina, inogona kuburitsa gabions eakasiyana hupamhi uye mesh saizi. Muchina wedu zvikuru kushandiswa kuburitsa hombe kukura uye rinorema-basa hexagonal (kwakakurudzira, galvanic & PVC waya) waya meshes kuti fenzi uye ibwe gabions kushandiswa.
Muenzaniso Saizi saizi(mm) Max upamhi(mm) Waya dhayamita(mm) Kukanganisa nhamba Main dhiraivha mugodhi kumhanya Motokari(KW) Speed(m / h)
3.Superiorities yeketani yekubatanidza fenzi yekugadzira mutsara
Gabion mesh muchina, inonziwo inorema-basa hexagonal waya mesh muchina, inoshandiswa kugadzira gabion mesh uye dombo bhokisi, rinoshandiswa zvakanyanya pane dziviriro yenyika, kuvaka, kurima, peturu, indasitiri yemakemikari, kupisa pombi, kugungwa, zvikomo, mugwagwa, uye zambuko. , nezvimwe.
1.Mitsubishi PLC & Kubata skrini, Schneider zvemagetsi, Invt inverter.
2. Mukati meiyo crossbeam, pane baseplate yakasungwa, 12mm ukobvu. kugadzikana kwepamusoro, kusimbisa kwakasimba kusimuka-kushora (dhizaini nyowani).
3. Iyo crossbeam inogadzirwa mune yakasarudzika chikuva ine yakanyanya kunyatso. Unhu hunogona kuvimbiswa. Iyo gungano yemuchina inopedzwawo pane yakasarudzika chikuva. Iko kushanda kwese kwakavandudzwa.
4. Muchina wedu unoshandisa madhiraivha maviri ekutyaira panzvimbo yeimwe tsvimbo yekutyaira, kumhanya-mhanya & kumhanya kwakatsiga
5. Muchina unotora chishandiso chakakosha kuita kuti mafuta ekugadzirisa ashandiswe zvakare.
6. Iyo yegwenzi yegwenzi yemuchina wedu ine yakanaka abrasion kuita, zvirinani kune axis inotenderera.
7. Vhiri vhiri remuchina rinokandwa simbi zvinhu, rakasimba.
8. Iyo cam yemuchina ndeye nodular cast iron, yakasimba.
9. Iyo yekukwevera ndiro ine lining, hurefu hupenyu hwebasa.
10. Kana waya yadambuka uye waya wekutenderera ukashandiswa kumusoro, muchina unogona kumisa basa otomatiki.
Gabion mesh inoshandiswa kugadzira matombo waya mesh matanga kana mabhokisi ematombo, ayo anoshandiswa zvakanyanya mukudzivirira uye kutsigira gungwa regungwa, makomo, mugwagwa uye zambuko, matura uye imwe humainjiniya, zvakare Ndicho chinhu chakanakisa chemafashama.
Gabion mesh (Hexagonal waya mesh) inoshandiswawo zvakanyanya kuita fenzi, kusefa mesh mukugara nekuchengetedza nzvimbo, kuvaka, kurima, peturu, indasitiri yemakemikari, mapaipi ekupisa, uye zvimwe pombi parcel waya mesh.
Enviromesh Gabion Machine
Gabion Basket Mesh Muchina
Gabion Mesh Bunnings Muchina
Gabion Mesh Sheets Muchina
Gabion Waya Mesh ukomba Machine
Heavy Duty Hexagonal Gabion Mesh Muchina
Steel Mesh Gabion Zvizarira Machine
Welded Mesh Gabion Mabhasiketi Muchina
Waya Mesh YeGabion Wall Machine